Ny Semalt Islamabad Expert Outlines ny fepetra ilaina ilaina rehefa manatsara ny tranokalanao
Ny fitadiavana maotera dia tokony ho eo an-tampon'ny sainao foana ary ho azo antoka fa hanaraka ny torohevitra tsara ianao. Ny tsy firaharahiana an'ity lafiny manan-danja ity dia mety hanimba ny fototry ny tranonkalanao ary mety hisakana anao tsy hanamora ny fahafahanao mahazo vola. Amin'ny maha-tompona orinasa an-tserasera azy, ny tanjonao voalohany dia ny hampitomboana ny tombony ary ny fanaovana izany dia tokony ho betsaka ny olona liana amin'ny vokatra sy ny serivisinao. Mba hahaliana azy ireo dia mila mahafantatra ny fisiany izy ireo aloha. Tsy ho tanteraka izany raha mora mahita ianao isaky ny mitady ny vokatrao ao anaty aterineto. Ny fanatsarana milina fikarohana dia tena ilaina mba hampitombo ny fifamoivoizana mankany amin'ny tranokalanao.
Michael Brown, mpitantana ny Success Suisse amin'ny Semalt , dia mamelabelatra ao amin'ny lahatsoratra momba ny SEO.
Ity dia karoka fikarohana fikarohana izay tena ilaina amin'ny fanolorana ny valin'ny fikarohana avoakanao rehefa mitady olona mividy vokatra sy serivisy hividianana azy.
Misy toro-hevitra fototra izay tsy maintsy arahanao raha te-hanatsara ny valin'ny fikarohana izay misy ianao.
Ny votoaty dia ny zava-drehetra
Ny votoatin'ny tranonkalanao dia ny mpanjaka. Ny fomba hametrahanao sy ny famolavolana azy dia hamaritra ny fomba hametrahana ny tranokalanao. Na dia manana ny teny fanalahidy marina aza ianao, raha tsy manintona ny mpamaky ny votoatinao dia tsy ho sarobidy amin'ny tranonkalanao ny tranonkalanao. Ny votoaty dia tokony ho tokana ary misoroka duplicates. Tokony hampiseho ireo fitaovana fikarohana izay afaka ho azo itokisana be ianao, ary izany dia hanatsara ny isa misy anao.
Fantaro izay tadiavin'ny fikarohana
Hanampy anao hahatratra ny votoatin'ny mitady motera mitady, Google dia afaka mamaritra ny maha-zava-dehibe ny votoatiny..Izany dia momba ny lohateny, ny famaritana, ny lohahevitra ary ny lahatsoratra ampiasaina ao anaty votoaty. Ny motera koa dia hitady ny fahombiazan'ny tranonkala. Tokony ho haingana sy mavitrika izany. Ny traikefa amin'ny mpampiasa dia tokony ho tsara ihany koa, mahasarika ny mpampiasa ary mora ny mivezivezy. Tokony ho avo lenta ihany koa ny dikan'ny tranonkala hafa ho fampahafantarana na tranonkala.
Fantaro tsara ny modelinao
Alohan'ny hametrahana ny tranokalanao, tokony ho fantatrao ny tanjonao. Izany dia hanampy anao hamaritra izay manamaivana ny fifampiresahana sy ny fanirianao hahazo tombony avy amin'ny tranokalanao.
Fahatakarana ny metadata
Ny votoatinao dia tokony asiana marika amin'ny famaritana sasany satria ny teny fanalahidy metadata dia manampy ny mpamaky hahita pejy manokana. Fantaro ireo marika dia tompon'andraikitra amin'ny famoahana ny tranonkalanao. Tokony ho tokana izy ireo ary tsy misy dika mitovy.
Mifanaraka amin'ny anaranao
Mba hahatratraranao an'izany, dia mifidiana anarana izay mamaritra ny marikao, ary ataovy izay hahazoana antoka fa ho fohy izany. Ataovy tsy tapaka izany. Hevitra tsara raha mividy sehatra taloha ianao, fa azonao antoka fa tsy nanao zavatra izay mety hanimba ny lazany ny tompony teo aloha.
Fanatsarana ny vokatra samihafa
Soa ihany fa manana teknolojia mivoatra ny olona amin'izao fotoana izao, afaka miditra amin'ny aterineto avy amin'ny karazana fitaovana isan-karazany ny olona, ​​anisan'izany ny finday sy ny tablette. Raha mamorona ny votoatiny ianao, dia ataovy ao an-tsainao izany. Ny votoaty lehibe dia tokony hanan-karena amin'ny horonan-tsary sy sary. Manome pdf maimaim-poana mba ahafahanao mividy tranonkala avy amin'ny fitaovam-pikarohana.
Fanatsarana ny varotra
SEO tsy mandinika afa-tsy ny votoatin'ilay tranonkala. Ireo mpitsikilo dia afaka manitatra any amin'ny toerana hafa tahaka ny Twitter, mailaka, Facebook mba hanonona afa-tsy vitsivitsy. Ny fanoritsoritana ao amin'ireo tranonkala ireo dia tokony hohatsaraina rehefa hitondra ny mpamaky hiverina any amin'ny tranokalany.
Fantaro izay tokony hataonao
Misy zavatra tsy tian'ireo fitaovam-pitadiavana izay ahitàna ny teny fanalahidy, ny fividianana rohy ary ny traikefan'ny mpampiasa.
Ny fitandremana ireo fepetra ireo dia hanampy anao hanatsara ny valin'ny fikarohanao ka hampitombo ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao Source .